आयल निगमलाई मासिक १५ करोड घाटा ! - Everest Dainik - News from Nepal
आयल निगमलाई मासिक १५ करोड घाटा !
काठमाडौं, भदौ ३ । नेपाल आयल निगमको घाटा बढेर १५ दिनमा २५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर अगस्ट १ र १६ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई १५ दिनमा २५ करोड रुपियाँ घाटा हुने देखिएको हो । मासिक भने निगमलाई ५० करोड रुपियाँ घाटा हुने देखिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छापिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस किन घटेन इन्धनको मूल्य?
याे पनि पढ्नुस आयल निगमका देशभरका डिपो प्रमुखको सरुवा, को कहाँ? (सूचीसहित)
अर्कातर्फ भने अमेरिकी डलर बलियो हुँदै जानुले पनि निगमको घाटामा वृद्धि गर्नको लागि मद्दत पुगेको छ । डलरको विनिमयदरमा प्रतिडलर वृद्धि हुँदा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय डलरको मूल्यअनुसार निगमले आईओसीलाई भुतानी गर्नुपर्ने हुँदा निगमलाई थप नोक्सान थपिएको निगमका निमित्त प्रमुख सुशील भट्टराईले बताए ।
याे पनि पढ्नुस ग्यासको आयात औसत खपतभन्दा बढी
ट्याग्स: १५ करोड घाटा, ioc, oli nigam, नेपाल आयल निगम